Beautify keung wa: January 2011
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:06 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 6:53 PM0comments
သူများအောင်မြင်သလို ကိုယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်၊လုပ်လိုက်တိုင်း အလွဲလွဲအချော်ချော်
သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ပါခင်ပွန်းကြီး၁၀-ပါးကိုပြစ်မှားမိလျှင် အောက်ပါဒုက္ခများကိုခံစားရတတ်သည်။
၃။မျက်စိ နား...နှာ လက်ခြေအင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း
၉။စည်းစိမ်ဥစ္စာ အခြွေအရံ နောက်လိုက်တပည့်များ ပျက်စီးခြင်း
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 6:45 PM0comments
If you want to attain progress , to success in your whole life, to get happy and peaceful,
you should follow the following 38 principles of life.
1.Avoid fools bad character.
အကျင့်စာရိတ္တမကောင်း လူမိုက်တွေကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ...။
2.Associate with the wise.
3.Honour to honourable.
4.Live where virtue, wealth, knowledge are available.
5.Do wholesome deeds before.
6.physically health, do good in mind.
7.Try to get vast knowledge and learning.
8.Learnajob to work for an earning livelihood.
9.Follow descipline all your action.
10.Speak truthfully and gently.
11.Support and look after father and mother.
12.Support wife and children: instruct your children.
13.Follow blameless business occupation.
14.Give alms, help as mush as possible.
15.Do wholesome deeds,not to destroy character.
17.Do public welfare service voluntarily.
18.Avoid thinking evil.
19.Avoid bad speech, bad deeds.
20.Avoid liquor, harmful drugs.
21.Do not forget good deeds.
22.Give respect to Bikkhus, parents, teacher, and elders.
23.Do not be prideful.
24.Be satisfied easily with the wage and job you do.
25.acknowledge gratitude: repay gratitude.
26.Listen the correct Dhamma at suitable time, read Dhamma books
28.Obey the instructions of parents, teacher and elders.
29.Go near to good wise persons to worship.
30.Take examples, methods from them, discuss them.
31.Control eye,ear,nose,tongue,bodily faculties or senses.
32.Cultivate four divine abiding high minds.
33.See everything with truthful eye, wisdom eye.( the four noble of truth)
34.Do to get Nibbana. practise Vipassana daily.
35.To attain Noble state, be patient with good and evil.
36.Be life free from danger or harm by vipassana meditation.
37.Be peaceful in mental and spirit spheres by vipassana.
ကိလေသာမြူမ၀င်ထာဝရ မျက်စိကြည်လင်အောင် ၀ိပဿနာအားထုတ်ပါ...။
38.To get freed in from death let us meditate by vipassana.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:05 PM0comments
ဘဒ္ဒန္တ သီရိန္ဒာဘိဝံသ ၊ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ၏ ဩ၀ါဒကထာကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
အလိုဆိုးရှိသောသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း အလိုဆိုးရှိသူ ဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ အလိုဆိုးရှိသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၂။ အတ္တုက္ကံသန ပရဝမ္ဘန--
မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချတတ်သောသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချတတ်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင် သူတပါးကို ရှုတ်ချသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
အမျက်ထွက်သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း အမျက်ထွက်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ အမျက်ထွက်သူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၄။ ဥပနာဟီ --
အမျက်ထွက်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုးဖွဲ့သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြ မည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်သူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၅။ အဘိသင်္ဂိ --
အမျက်ထွက်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် အစွဲကြီးသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း အစွဲကြီးသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ အစွဲကြီးသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၆။ ကောဓနော ကောဓသာမန္တဝါစံ နိစ္ဆာရေတာ --
ရန်စကားပြောသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း ရန်စကားပြောသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ ရန်စကားပြောသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
စောဒက က စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်”ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်းသော သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်းသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ်ပြန်တင်သော သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ်ပြန်တင်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ စောဒက-က စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ်ပြန်တင်သူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၀။ အညေနညံ ပဋိစရတိ ဗဟိဒ္ဓါ ကထံ အပနာမေတိ ကောပဉ္စ ဒေါသဉ္စ အပ္ပစ္စယဉ္စ ပါတုကရောတိ--
စောဒက-က စောဒနာသော် စကားတစ်မျိုးဖြင့် စကားတစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်းတတ်သော၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ်တတ်သော၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှားပြုတတ်သော သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် စကားတစ်မျိုးဖြင့် စကားတစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်းတတ်သော၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ်တတ်သော၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှားပြုတတ်သောသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ စောဒက-က စောဒနာသော် စကားတစ်မျိုးဖြင့် စကားတစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်းတတ်သော၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ်တတ်သော၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှားပြုတတ်သောသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၁။ အပဒါနေ န သမ္ပာယတိ--
စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် မဖြေဆို နိုင်သောသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် မဖြေဆိုနိုင်သောသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် ဖြေဆိုတတ်သူ ဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၂။ မက္ခီ ပဠာသီ--
ဂုဏ်ကျေးဇူး ချေဖျက်သူ၊ ဂုဏ်ပြိုင်သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း ဂုဏ်ကျေးဇူး ချေဖျက်သူ၊ ဂုဏ်ပြိုင်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ ဂုဏ်ကျေးဇူး ချေဖျက်သူ၊ ဂုဏ်ပြိုင်သူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၃။ ဣဿုကီ မစ္ဆရီ--
မနာလို ဝန်တိုသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း မနာလို ဝန်တိုသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြ မည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ မနာလို ဝန်တိုသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၄။ သဌော မာယာဝီ --
ဟန်ဆောင်သူ လှည့်ပတ်သူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း ဟန်ဆောင်သူ လှည့်ပတ်သူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ ဟန်ဆောင်သူ လှည့်ပတ်သူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၅။ ထဒ္ဓေါ အတိမာနီ --
ခက်ထန် မောက်မာသောသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း ခက်ထန် မောက်မာသောသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ ခက်ထန် မောက်မာသောသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
၁၆။ သန္ဒိဋ္ဌိ ပရာမာသီ အာဒါနဂ္ဂါဟီ ဒုပ္ပဋိနိဿဂ္ဂီ --
မိမိအယူကို စွဲလမ်းတတ်သော၊ မြဲမြံစွာ ယူတတ်သော၊ မစွန့်လွှတ်နိုင်သောသူကို ငါသည် မချစ် မနှစ်သက်။
“ငါလည်း မိမိအယူကို စွဲလမ်းတတ်သော၊ မြဲမြံစွာ ယူတတ်သော ၊ မစွန့်လွှတ်နိုင် သောသူဖြစ်လျှင် ငါ့ကိုလည်း သူတပါးတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်” ဟု ရှုဆင်ခြင်၍ မိမိအယူကို စွဲလမ်းတတ်သော ၊ မြဲမြံစွာ ယူတတ်သော၊ မစွန့်လွှတ်နိုင်သောသူ မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
ဤသို့ နေ့ရော ညပါ အခါမလပ် ရှုဆင်ခြင်ပါက “ပီတိ ပါမောဇ္ဇ” တရား တနေ့တခြား တိုးပွားလာသည့်အပြင် ကြေးမုံ မှန်ပြင်ကို ကြည့်ရှုသောသူသည် မိမိမျက်နှာရိပ်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရဘိသကဲ့သို့ --
“အပါယဂမနီယ အကုသိုလ်ပါပဓမ္မများ” ကို “မိမိလက်ကို အတင်းအကြပ် ဆွဲခေါ်နေသော သူသတ်သမား” အသွင် ထင်မြင်လာပါတော့သည်။
ထိုအခါ အကုသိုလ်တရားများကို ပယ်ရှားရန်အတွက် “ကသိုဏ်းပရိကမ် အလုပ်”ကို အားထုတ်လျက် “ ဝိပဿနာတရား” ထပ်ဆင့်ပွားများပြီးလျှင် “သန္တိသုခ အမတနန်း” သို့ တက်လှမ်းနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:30 AM0comments
ပန်းနံ့ထက် သီလနံ့က ပိုမွှေး
အပ္ပမတ္တေ အယံ ဂန္ဓော၊ ယွာယံ တဂရစန္ဒနံ။
တောင်ဇလပ်ပန်း စန္ဒကူးပန်းတို့၏အနံ့သည် အနည်းငယ်မျှသာ မွှေး၏။ သီလရှိသူတို့၏ သတင်းအနံ့
သည် ထူးကဲ လွန်မြတ်သည်ဖြစ်၍ နတ်ပြည် ဗြဟ္မပြည်အထိ ပျံ့နှံ့ ကြိုင်လှိုင်၏။
Faint is the fragrance of tagara and sandal, but excellent is the Fragrance of the virtuous,
wafting even amongst the gods
မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်အမူအရာအတိုင်းပေါ်သလို ကိုယ်ပြုသမျှ ကိုယ့်မှာပေါ်လိမ့်မည်
၁။ သူများအသက်၊ သတ်သည့်တွက်၊ အသက်ကိုယ့်မှာတို။
၂။ မသတ်ရှောင်ရှား၊ ထိုသူများ၊ ရှည်လျှားအသက်ကို။
၃။ နှိပ်စက်ကလူ၊ ညှဉ်းဆဲသူ၊ ပြောထူရောဂါဆို။
၄။ သနားစိတ်သွင်း၊ မနှိမ်နင်း၊ ကင်းရှင်းရောဂါကို။
၅။ ထန်ပြင်းဒေါသ၊ ကြီးတတ်က၊ အလှပျက်မည်ဆို။
၆။ ဒေါသကင်းစင်၊ မေတ္တာယှဉ်၊ ကြည်လင်လှသကို။
၇။ မနာလိုပြန်၊ ဣဿာထန်၊ ခြံရံကင်းမည်ဆို။
၈။ ဣဿာမထား၊ ၀မ်းမြောက်ငြား၊ ပေါများခြံရံကို။
၉။ မလှူမဒါန်း၊ မပေးကမ်း၊ ခြောက်ခန်းဥစ္စာဆို။
၁၀။ စွန့်ကြဲလေတုံ၊ ပြုပါကုန်၊ ကုံလုံကြွယ်ဝလို။
၁၁။ မာန်မာနကြွယ်၊ ထိုသူဝယ်၊ မျိုးနွယ်ညံ့မည်ဆို။
၁၂။ ထိုက်သူရိုကျိုး၊ မာန်ကိုချိုး၊ အမျိုးမြတ်သကို။
၁၃။ သိဖွယ်ဟူသမျှ၊ မမေးက၊ ဖျင်းအ ပညာဆို။
၁၄။ ကြားမြင်များအောင်၊ မေးလေ့ဆောင်၊ ခုနောင်တတ်သိလို။
(မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ ရတနဂုဏ်ရည်မှ)
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လျောင်းလျာတုန်းက၊ နောက်ဆုံးအထိ ပါရမီ။
လူနတ်များစွာ ချမ်းသာရေးမို့၊ အသက်ပေး၍ ဖြည့်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာအတွက်တော့၊ ငါပါ အသက်ဆုံးစေမည်။
နောက်မဆုပ်ပေါင် ခုလိုတွေးလို့၊ ကုသိုလ်ရေးမို့ ကြိုးစားမည်။
ဒို့လည်း ကြိုးစားမည်၊ ဒို့လည်း ကြိုးစားမည်။
လူမိုက်ဆိုတာ မကောင်းမှုကို ပျားရည်လိုထင်
(ပါဠိ) မဓူဝ မညတိ ဗာလော၊ ယာဝ ပါပံ န ပစ္စတိ။
ယဒါ စ ပစ္စတိ ပါပံ၊ ဗာလော ဒုက္ခံ နိဂစ္ဆတိ။
(မြန်မာ) “ လူမိုက်သည် မိမိ၏မကောင်းမှု အကျိုးမပေးခင်မှာ မကောင်းမှုကို ပျားရည်လို မှတ်ထင်၏။
မကောင်းမှု အကျိုးပေးသောအခါ လူမိုက်သည် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားရ၏။”
အများအကျုိး၊ ရွက်သည်ပိုးက။ ခနိုးခနဲ့၊ ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း။
မဖဲ့ မစောင်း၊ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ရှေးရှုနှင်လော။ ။
(ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ရွေဟင်္သာ ဆရာတော်)
လမ်းနှင့်ရေစဉ် မဂ်လေးခွင် သင့်တွင်အဆင်သင့်
၁။ ရန်သူ ၀ိုင်းထား၊ ထိုယောင်္ကျားကား၊ ပြေးသွားဘို့ရာ၊ လမ်းပေါက်သာလျှက်၊ ပြေးမထွက်၊
၂။ မစင်လူးလျှင်၊ အေးကြည်လင်သည့်၊ ရေစင်ရှိလျှက်၊ မဆေးရက်၊ ရေတွက် မဟုတ်ပေ။
၃။ အနပ္ပကမ်း၊ ဘေးဘျမ်းများစွာ၊ သံသရာမှ၊ ထွက်ရာလမ်းစ၊ သမထ ၀ိပဿနာ၊ ကိလေသာပင်၊
သန့်စင်လျှော်ဆေး၊ ရေအေး လေးမဂ်၊ ရှိပါလျှက်ကို၊ ထွက်မပြေးလို၊ မဆေးလို၊ နင့်ကိုယ် နင့်တွက်ပေ။
၁။ ဘုရားရှင်တော်၊ မပွင့်ပေါ်လျှင်၊ လူတော်အများ၊ စိတ်ကောင်းထားလည်း၊
ဤကား ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှင့်၊ ထိုထိုဘုံဘ၀၊ မသိကြ၊ များလှအပြစ်တွေ။
၂။ ဘုရားရှင်တော်၊ ပွင့်ထွန်းပေါ်၍၊ ဟောဖော်ညွှန်ကြား၊ မြတ်တရားကြောင့်၊
ဤကား ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှင့်၊ ထိုထိုဘုံဘ၀၊ သိကြရ၊ များလှ ကျေးဇူးပေ။
၃။ ကျေးဇူးတော်ရှင်၊ ဘုရားရှင်ကို၊ နေ့စဉ် မပြတ်၊ ကျေးဇူးဆပ်ဘို့၊ ပရိယတ်နှင့်၊
ပဋိပတ်နှစ်ဖြာ၊ သာသနာကို၊ ကောင်းစွာ ကြိုးကုတ်၊ လွန်အားထုတ်၊ အဟုတ်ကျင့်ကြစေ။
၁။ ငါတို့နေရာ ဤကမ္ဘာ တဏှာအုပ်စိုးသည်
၂။ တဏှာစေရာ မနေသာ ဖွေရှာဆက်ရမည်။
၃။ ရသည့်ဥစ္စာ ချစ်သူပါ စွန့်ခွါသွားရမည်။
၄။ တကယ့်အရေး တကယ်ဘေး ဘယ်သွေးဘယ်သား မကယ်ပြီ။
၅။ ငါနှင့်ရွယ်တူ ငါအောက်လူ ကြီးသူသေကြများလှပြီ။
၆။ ခဏမစဲ အိုစမြဲ ငါလဲ သေဘက်နီးခဲ့ပြီ။
၇။ ဇရာမီးတောင် ကိုယ်တည်းလောင် သေအောင်မြိုက်တော့သည်။
၈။ မသေရခင် သွားလမ်းစဉ် ကြိုတင်ပြင်သင့်ပြီ။
၉။ ဒါန သီလ ဘာဝနာ လမ်းသာထွင်လိမ့်မည်။
၁၀။ မဂ္ဂင်ယာဉ်ကြီး အမြန်စီး ခရီးထွက်တော့မည်။
မနေရလို့၊ သေရသောခါ၊ ကိုယ့်နောက်ကိုယ်ကား၊ ဘယ်များပါမှာ။
ပစ္စည်းအစုစု၊ တစ်ခု မပါ၊ ကိုယ်ပြုထား၊ ကံများ သူတို့ပါ။
၁။ မိမိရဲ့ လောဘများကို ဒါနတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၂။ မိမိရဲ့ ဒေါသများကို သီလတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၃။ မိမိရဲ့ မောဟများကို ၀ိပဿတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၄။ မိမိရဲ့ သူတပါးအပေါ် ယှဉ်ပြိုင်လိုမှုများကို မေတ္တာတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၅။ မိမိရဲ့ သူတပါးအပေါ် အနိုင်ယူလိုမှုများကို ကရုဏာတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၆။ မိမိရဲ့ သူတပါးအပေါ် မနာလိုမှုများကို မုဒိတာတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၇။ မိမိရဲ့ သူတပါးအပေါ်ိရန်လိုမှုများကို ဥပေက္ခာတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၈။ မိမိရဲ့ သူတပါးအပေါ်ိအပြစ်ပြောလိုမှုများကို ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၆။ မိမိရဲ့ မနောကံ အကုသိုလ်များကို ၀စီကံကုသိုလ်ဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၆။ မိမိရဲ့ နိမ့်ကျနေတဲ့စိတ်များကို မိမိကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
(ချမ်းအေး ဆရာတော်။ စစ်ကိုင်း)
အမေရိကန်မှာ၊ လူများစွာ၊ ဘယ်ခါ အားသည် မရှိပြီ။
ကွေ့ကြသူငှါ၊ ပြောကြတာ၊ ငါ့မှာ “အချိန်မရှိ” ပြီ။
သင့်အချိန်ကို၊ ဘယ်တွက်ပို၊ သုံးလို ကုန်ခဲ့သည်။
တဏှာလိုလိုက်၊ သူ့စရိုက်၊ အကြိုက်လိုက်ခါနေခဲ့ပြီ။
ဘုရား တရား၊ ချိန်မအား၊ သင်ကားငြင်းခဲ့ပြီ။
တစ်ဘ၀တာ၊ ခဏစာ၊ ပြင်ကာနေခဲ့သည်။
ဘ၀များစွာ၊ သံသရာ၊ ရှည်ကြာမည်ကို သိသင့်သည်။
ဘ၀ တို-ရှည်၊ ထိုနှစ်လီ၊ ဘယ်သည် ပို၍ပြင်သင့်သည်။
သံသရာမှ၊ လွတ်လမ်းစ၊ ခုက စ၍ရှာသင့်ပြီ။
အချိန်မပို၊ သင်ကဆို၊ အို-နာ-သေ ချိန် လာလိမ့်မည်။
အချိန်မရှိ၊ သင်ဆို၏၊ သေမည့် အချိန်ရှိလိမ့်မည်။
အချိန်မရ၊ သင့်ဘ၀၊ သေမှ ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မည်။
အချိန် မအား၊ စောင့်ရန်တား။ ဆိုင်းထားသေမင်း မရှိပြီ။
သေဘို့အရေး၊ အချိန်ပေး၊ အလေးထား၍ ပြင်သင့်ပြီ။ ။
(အဇူဇာကျောင်းဆရာတော် အရှင်ဧသက။ May, 1995)
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ကြီးနေကြတုန်းပဲလား။
* သွားတွေ ကျိုးနေပြီ၊
* အရေတွေ တွန့်နေပြီ၊
မကောင်းမှု အကုသိုလ်တွေပြုရတာ မတွန့်ကြသေးဘူးလား။
* ဆံပင်တွေ ဖြူနေပြီ၊
* ခါးတွေ ကိုင်းနေပြီ၊
ကမ္မဋ္ဌာန်း ဘာဝနာဘက် မကိုင်းကြသေးဘူးလား။
* မျက်စေ့တွေ မှုန်ဝါးနေပြီ၊
* ဒီအခြေအနေရောက်တာတောင် မပြင်ရင်
အပါယ်လေးခွင် သွားဖို့သာ ပြင်ကြပေတော့။ ။ (Nov, 2010)
* အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ “လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ” တို့ကြောင့်ဖြစ်ရ၏။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မဖြစ်အောင် ဆင်ချင် စောင့်စီး ချုပ်တီးနိုင်လျှင် အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင်။
* ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ “အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟ” တို့ကြောင့်ဖြစ်ရ၏။
အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟ ဖြစ်အောင် ဆင်ချင် ပွားများ တိုးပွားနိုင်လျှင် ကုသိုလ်စိတ်များဖြစ်၏။
(အလောဘ=မလိုချင်မှု၊ အဒေါသ=မေတ္တာ၊ အမောဟ= ဉာဏ် ပညာ။) (Nov, 2010)
လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ စိတ်ဖြင့် မပြုလုပ်ပါနဲ့
လောဘော အတ္ထံ န ဇာနာတိ။ (လောဘသည် အမှား-အမှန်ကို မသိ)
ဒေါသော အတ္ထံ န ဇာနာတိ။ (ဒေါသသည် အမှား-အမှန်ကို မသိ)
မောဟော အတ္ထံ န ဇာနာတိ။ (မောဟသည် အမှား-အမှန်ကို မသိ)
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ဖြစ်ခိုက်မှာ ဉာဏ်ပညာမဖြစ်နိုင်၍ အမှား-အမှန်ကို ဆင်ချင်သိနိုင်စွမ်းမရှိ။
အကျိုးမဲ့အမှားများကိုသာ ပြုမိတတ်၏၊ ထို့ကြောင့် ယင်းစိတ်များဖြစ်ခိုက်မှာ ဘာမှမပြုမိပါစေနှင့်၊
ဘာမှ မဆုံးဖြတ်ပါလေနှင့်။ (Nov, 2010)
စိတ်ဓါတ် မြင့်မြတ်သူတို့သည် ကုသိုလ်အဖြစ်များလေ့ရှိ၏။ စိတ်ဓါတ် နှိပ်ကျ ယုတ်ညံ့သူတို့သည်
စိတ်ဓါတ် မြင့်မြတ်သူတို့သည် တစ်ပါးသူ၏ အကုသိုလ်မှုကို မတုန့်ပြန် သိခံနိုင်စွမ်းရှိ၏။စိတ်ဓါတ်နှိပ်ကျ
ယုတ်ညံ့သူတို့သည် တစ်ပါးသူ၏ အမှုမှန်သမျှ ဘာတစ်ခုမှ သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိ။ မကောင်းမှုကို ကတ်ကတ်
လန်အောင်တုန့်ပြန်တတ်၏။ ကောင်းမှုများကိုလည်း အဘိဇ္ဈာ ဣဿာပွား၍ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတတ်၏။
တစ်ပါးသူ စိတ်ဆိုးတိုင်း ကိုယ်ကပြန်စိတ်ဆိုးရင် ကိုယ့်စိတ် နုနေသေး၏။
မြေပျော့ရင် ခြေရာထင်သလို စိတ်ပျော့ရင် အငြိုးအတေး စွဲထင်၏။ အငြိုးကြီးတတ်၏။
ဒေ၀ဒတ်သည် ရွဲကုန်သည်ဘ၀မှ ထားခဲ့တဲ့ ရန်ငြိုးကြောင့် သံသရာတလျှောက်လုံး ဘုရားလောင်းအား
ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့၏၊ အ၀ီစိငရဲသို့လဲ အခေါက်ခေါက် အခါခါ ရောက်ခဲ့ရ၏။
ရန်ငြိုးကို မပယ်ပါက တစ်သံသရာလုံး စွဲထင်တတ်၏။ သူတပါးအား ဖျက်ဆီးလိုသောရန်ငြိုးသည်
မိမိကို ဖျက်ဆီး၏။ (Nov, 2010)
* မိဘအပေါ် ဆိုးသူသည် သားဆိုးသမီးဆိုး ရတတ်၏။
* ယောက္ခမအပေါ် ဆိုးသူသည် သမက်ဆိုး၊ ချွေးမဆိုး ရတတ်၏။
* ဆရာသမားအပေါ် ဆိုးသူသည် တပည့်ဆိုးနှင့်တွေ့ရတတ်၏။
* သူငယ်ချင်းအပေါ် ဆိုးသူသည် သူငယ်ချင်းဆိုးများနှင့်တွေ့ရတတ်၏။
ကိုယ်ဆိုးလျှင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ဆိုးလိမ့်မည်။
ကိုယ်ကောင်းလျှင် ကိုယ့်ပ၀တ်ဝန်းကျင်က ကောင်းလိမ့်မည်။ (Nov, 2010)
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:43 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:14 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:50 PM0comments
ပဒုမ္မာကြာရိုးသည် ထက်ပိုင်းပြတ်သော်လည်း အဆက်မပြတ် ။
သူတော်ကောင်းသည် (အနေဝေး၍ ) အဆက်ပြတ်သော်လည်း မေတ္တာမပြတ်။
သူတော်ကောင်းနှင့် ပေါင်းသင်းမှ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ မြင့်မြတ်သည်။
သူတော်ကောင်းခြေမှုန့် ကိုယ်၌ကပ်လျှင် အပါယ်မကျ။
သမုဒ္ဒရာရေ မီးကြောင့်မကျွမ်း ၊
ကျောက်ခဲ ရေကြောင့် မကျေ ၊
သူတော်ကောင်း မသူတော်ကြောင့် မတုန်လှုပ် ၊
သစ်ပင်ကြီးသည် ခုတ်လှဲသူကို မလဲမချင်း အရိပ်ဖြင့် အေးမြစေ၏ ၊
နံ့သာတုံးသည် မီးရှို့  သူကို မကျွမ်းမချင်း အနံ့ဖြင့် မွှေးမြစေ၏ ၊
သူတော်ကောင်းသည် ညှင်းဆဲသူကိုသော်လည်း မသေမချင်း အကျိုးဆောင်၏ ။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:40 PM0comments
ကျေးဇူးတော်ရှင် တိပိဋက ယောဆရာတော်ကြီးရဲ့ သံဝေဂဓမ္မ ကဗျာကို ပြန်လည်မျှဝေအပ်ပါတယ်၊ ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ့်အတွက်လား လူများအတွက်လားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ၊ ကိုယ်ရှာတဲ့ ရှာဖွေခြင်းကကော ဗုဒ္ဓအလိုကျ ရှာဖွေခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီလား ဆိုတာလဲ ကုသိုလ်ယှဉ်တဲ့အတွေးနဲ့ တွေးသင့်ပါတယ်၊
ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ သမုတ်ပါလည်း၊
ဆွေမျိုးမိဘ အ၀၀သည်၊ ချစ်ကြသော်လည်း၊
ရှိကာရှိတုန်း ရအောင်ဖြည့်။ ။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:33 PM0comments
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဘာမှမပိုင်ဘူး၊ ဘာမှမသေချာဘူး၊ ချောက်ကမ်းဘေး၊ လမ်းလျှောက်နေရသလို အချိန်မရွေး ကျသွားနိုင်တယ်၊ ကြက်ဥ ငှက်ဥတွေလို အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲသွားနိုင်တယ်။
မသေချာ မရောရာဘဲ လျှောက်လှမ်းနေရတဲ့ ဘ၀သံသရာကြီးထဲ မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီး နှင့် တွေ့ ကြုံနေရတဲ့အခါ ဘ၀ပဒေသာပင်ကြီးကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အသီးကို ဆွတ်ခူးလို့ရတယ်။
- ဒါန အသီးကို ဆွတ်ခူးမလား
- သီလ အသီးကို ဆွတ်ခူးမလား
- သမထ ၀ိပဿနာ အသီးကို ဆွတ်ခူးမလား
ဘာဆွတ်ဆွတ် ဘာခူးခူးရတာချည်းဘဲ၊ အထက်သွားမလား အောက်သွားမလား ရတယ်။ အဲ အဆွတ်ခူးမှား ပြီး လူ့ပြည်ပြန်ရောက်ရင် သာသနာက ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်အသီးကို ဆွတ်ခူးခူး နိဗ္ဗာန်ကိုပဲ ဆုတောင်းပြီး ဆွတ်ခူးကြ။
မြတ်စွာဘုရားကို အခြားလှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေနှင့် ပူဇော်တာထက် အခုလို ယောဂီတို့ တစ်ရှူ တစ်ရှိုက် တရားနှင့် ပူဇော်တာက ပိုမွန်မြတ်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ - မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီး လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေက အတီးအမှုတ် တွေနဲ့သီဆိုပြီး ပန်းနံ့သာအမွှေးအကြိုင်တွေနှင့် လိုလေသေးမရှိ အခါမဲ့ပန်းတွေလဲ ပွင့်လို့ ၊ သက်ရှိသက်မဲ့ တွေကတောင် ပူဇော်ကြတာ။
ဒီလိုပူဇော်တာတွေကြည့်ပြီး မြတ်စွာဘုရားက အရှင်အာနန္ဒာကို နောက်ဆုံးမှာသွားတာက ချစ်သား အာနန္ဒာ…… ‘ ဒီလိုပစ္စည်းဝတ္ထုတွေနဲ့ ပူဇော်တာ ငါဘုရားကို ရိုသေလေးစားရာမရောက်ဘူး ၊ မြတ်နိုးကော်ရော် ရာလဲ မရောက်ဘူး၊ ရဟန်းဖြစ်စေ၊ လူဖြစ်စေ တရားနှလုံးသွင်း ရှုမှတ်ပြီး ပူဇော်တာကမှ အကောင်းဆုံး ပူဇော် ရာရောက်တယ် ’ လို့ ဟောထားခဲ့တာ။
ယခု ယောဂီတို့ ဘုရားကြိုက်တဲ့ ပူဇော်နည်းနှင့် ပူဇော်နေကြပြီ။
လူတွေက သူလို ကိုယ်လိုတွေပေါနေတော့ လူ့ဘ၀ကို လွယ်လွယ်ကူကူရနေတယ်လို့ ထင်နေကြ တာ၊ ရခဲတယ်လို့ မထင်ကြဘူး၊ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မထင်ကြဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိကြ၊ မထင်ကြတော့၊ အချိန်တွေဖြုန်းပြီး မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ တန်တန် နေကြတယ်။
သေခါနီးမှ အဖေကယ်ပါ ၊ အမေကယ်ပါ၊ သားကယ်ပါ၊ သမီးကယ်ပါ နှင့် ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ဘူး၊ လက်ပိုက်ကြည့်နေရတာ။
ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကုသိုလိ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့တရားကမှ ကယ်နိုင်တာ။ ဒါကြောင့် --- မဃဒေ၀- က
ရေဘေး မီးဘေး ပြည်ပျက်ဘေးကား - ဆယ်ရေးတစ်ရေး ကယ်နိုင်သေး၏
အိုဘေး နာဘေး သေခြင်းဘေးဟု ဤဘေးသုံးပါး လွန်ကြီးမားကား
သားနှင့်အမိ ဖြစ်တုံဘိလည်း မျက်စိအောက်တွင် ရင်ခွင်တင်လျက်
သက်သက်ရေးပိုင် မကယ်နိုင်ဘူး လက်မှိုင်ချကာ နေရစွာရှင့် …။
အတောင်ပံအားကိုးပြီး ပျံသန်းနေတဲ့ငှက်ဟာ တောင်ပံကျွတ်သွားရင် တောင်ပံကျိုးသွားရင် ပျံသန်း နိုင်ဦးမလား။
လူတွေလဲ ငယ်ရွယ် သန်မြန်တဲ့အချိန် သွားနိုင်လာနိုင်တုန်း က ဒါနဆိုတဲ့အလှူအတန်းကို တတ်နိုင် သလောက် မလှူမတန်း၊ သီလ ဆိုတဲ့ ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ ကိုလဲ ဟုတ်တိပတ်တိ မဆောက်တည်၊ သမထ ၀ိပဿနာ တရားကိုလည်း တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်မှ ပြည့်အောင်မထိုင်၊ သားကျွေးမှု မယားကျွေးမှုတွေ နှင့် ရက်တွေလတွေနှစ်တွေကုန် အသက်အရွယ်တွေက ကြီးလာတော့ ခြေမနိုင် လက်မနိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန် ဘယ်တရားကို အာရုံပြုရမယ် ဘာကိုမှတ်နေရမယ်ဆိုတာတောင် မသိတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းတဲ့ နိမိတ်ကထင်လာ၊ အာရုံတွေလွဲမှားပြီး အပယ်လေးပါးဆိုတဲ့ ငရဲ ၊ တိရိစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကာယ် ဘ၀တွေရောက်ရော။
ကိုင်း -- ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနှင့် တွေ့ပါလျက် အပါယ်လေးပါးရောက်သွားတာ ------ ကြောက်စရာ မကောင်းဘူးလား၊ သနားစရာမကောင်းဘူးလား။ ‘ ဒါကြောင့် တရားလက်မလွတ်ကြစေနှင့်် ’
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ လို့ ဘုရားရှင်က ဟောထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘုရား တရား သံဃာ ဆိုတဲ့ ရတနာ သုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အခါ -
ဂစ္ဆာမိ ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိရရ ကိုးကွယ်ကြ ၊ မမိတမိ၊ မထိတထိ ကိုင်ထားကိုးကွယ်ရင် အပါယ် လေးပါး ချောက်ကြီးထဲ ပြုတ်ကြမှာ-
မိမိရရ ကိုင်ထား ကိုးကွယ်ထားတော့ ယခုမျက်မှောက်ဘ၀ရော ၊ နောင်တမလွန် ဘ၀ရော -
 ဘေးရန် အန္တရာယ်တွေလဲ ကင်းရှင်းမယ်
 လောကီ လောကုတ္တရာ စည်းစိမ်တွေလဲ တိုးတက်တယ်
 ကောင်းတဲ့ သုဂတိ ဘုံဘ၀လည်း ရောက်ရတယ်
 မဂ်ဖိုလ် - နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကိုလည်း ဘ၀တိုတိုနှင့် ခံစား စံစားရောက်ရှိနိုင်တာပေါ့
ဒါကြောင့် ရတနာသုံးပါးကို ရိုရိုသေသေ မိမိရရ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြ။
ဘုန်းကြီးတို့ရော ယောဂီတို့ရော - ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက - သမုဒ္ဒ၀ါဠု သဲစုမက ဘုရားအဆူဆူပွင့်သွား ကြတာတောင် ပါမသွားဘူး။
ဘယ်ချောင်ကပ်ပြီး ဘယ်ရှောင်တိမ်းလို့ ဘယ်အလည်လွန်နေကြတယ် မသိဘူး။
မိန်းမ လည်တွေ ချည်းပဲ
သံသရာလုံး လည်လာခဲ့တာ ရှောင်တိမ်းခဲ့တာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သနားစရာ ၀မ်းနည်းစရာတွေ။ အခု ဘုရားစစ်ဘုရားမှန် ၊ တရားစစ် တရားမှန် ၊ သံဃာစစ် သံဃာမှန် တွေ တွေ့ လဲတွေ့နေပြီ။
အချိန်လဲရသေးတယ် --- အားထုတ်လို့လဲရသေးတယ်
လူတွေက စားဖို့သောက်ဖို့ ထမင်းဟင်းကြတော့ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း စားရမှာမမေ့ကြဘူး မဟုတ်လား၊ ကိုယ့်ကို ကယ်တင်ပေးမယ့် ဘုရား တရား သံဃာ ဆိုတဲ့ ရတနာသုံးပါးကြတော့ တစ်နေ့တစ်ခါ ရှိခိုးဝပ်ချဖို့ ကြတော့ မေ့ကြတယ်။ သတိမရကြဘူး။
မမေ့ကြနှင့် လူ့ဘ၀က အသက်တိုတိုလေး နေရတာ။ ဘယ်သူမှလဲ အသက်တစ်ရာထိ မနေရတော့ဘူး။ အသက်တစ်ရာ နေရတဲ့ ဆေးလဲ မရှိဘူး။ ဆေးရှိရင်လည်း ဘယ်လောက်ပေးရပေးရ ၀ယ်စား ကြမှာ။
အသက်ရှည်တာ တိုတာ အတိတ်ဘ၀က ကိုယ့်ရဲ့ ကိုသိုလ်၊ သီလတွေနှင့် လာခဲ့ကြတာ။ ဒါကြောင့် ယောဂီတို့ လူ့ဘ၀နေရတဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးမှာ သီလတွေလဲ လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကြ၊ တရားဘာဝနာ တွေလဲ ကြိုးစားအားထုတ်ကြ ။
ဘုရား တရား သံဃာဆိုတဲ့ ရတနာသုံးပါးကိုလဲ ထမင်းစားဖို့ မမေ့သလို နေ့စဉ်ကန်တော့ဖို့ မမေ့ကြပါ နှင့်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:45 PM0comments
The day in which meritorious deeds, wealth,health,education,power and position, or at least one of them,cannot be achieved is lost day, to be regretted .
It isasort of death while beingalive.
You are the guide of yourself for the attainment of health,wealth, education,power and happiness.
Merit is important to help us along our journey through life.
every one should practise meditation to be able to remove all defilements from our body.
The doctrine can salvage persons who abide by Dhamma from falling in to the four lower-abodes.
so, what should you do in your life?
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:16 PM0comments
သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီး၏ကျေးဇူးကြောင့် သာသနာ့သမိုင်းကို ပုံရိပ်ရှာဖွေရာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး
သာသနာရောင် ထွန်းလင်းခဲ့သည့်နေရာများစွာကို တွေ့ရပါသည်။
အသောကမင်း၏သာသနာပြုခဲ့သည့်နေရာတိုင်းမှာ ကျောက်စာတိုင်ကို စိုက်ထူလေ့ရှိခဲ့သည်။
ယခုခေတ်မှာ အိန္ဒိယလူမျိုးတို့သည် အသောကမင်းကြီးကို ဘုရားတစ်ဆူလို သတ်မှတ်ထားကြသည်။အသောကမင်းအကြောင်းကိုပြောလျှင်ဂုဏ်ယူကြသည်။
သို့သော်ယခုအိန္ဒိယမှာ အများစုက ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များသာ ဖြစ်ကြသည်။
လူတိုင်းအတွက် အတုယူသင့်တဲ့သင်ခန်းစာမို့ အသောကမင်း၏ကျောက်စာတိုင်ထိပ်အရုပ်ကြီးလေးခုဖွင့်ဆိုချက်ကို ဗဟုသုတအဖြစ် အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြထားသည်။
၁။ခြသေ့င်္ရုပ် ၂။ဆင်ရုပ် ၃။မြင်းရုပ် ၄။နွားရုပ်
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:53 PM0comments
မကျေနပ်စရာတွေကို ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် မုန်းစရာတွေပေါ်မယ်၊
ရန်ငြိုးပြေပျောက်ချင်လျှင် မကျေနပ်ချက်ကို မကြည့်ပါနဲ့၊မုန်းကွက်တွေကို မကြည့်ပါနဲ့၊
ချစ်ကြည်မြတ်နိုးနိုင်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့အကွက်တွေကိုပဲ ရှာကြည့်ပါ၊
ဘယ်လိုမှ ကောင်းကွက်ကို ရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုလျှင် မုန်းစရာလို့ သဘောမထားဘဲ သနားစရာလို့ အောက်မေ့လိုက်ရတယ်၊
သူ့ကံနဲ့သူပဲလို့ ဆင်ခြင်ပြီး ကိုယ့်မှာအကုသိုလ်တွေ မဖြစ်အောင်နေရတယ်၊ချစ်စရာမြတ်နိုးစရာ အကွက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီးဆင်ခြင်လိုက်၊ ဘယ်အခါတုန်းက သူကငါ့ကို ကောင်းခဲ့တယ်၊ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို တွေးတောဆင်ခြင်ုလိုက်၊
မေတ္တာဆိုတဲ့ ကော်အစေးဓာတ်ရှိလျှင် ဘယ်တော့မှ မကွဲတော့ဘူး၊ မေတ္တာဓာတ်ခံ ပါမှဖြစ်မယ်၊ ချစ်ကြည်ရေး၊မျှတရေး၊ စည်းရုံးရေး ဆိုတဲ့အရေးသုံးပါးကိုအလေးထားကျင့်သုံးရမယ်၊
ကိုယ့်စောင့်တရားလေးပါးကိုလဲ ပွားများရမည်၊ မေတ္တာဓာတ်ဝင်လျှင် မေတ္တာဖြစ်ပြီ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်လျှင် အကူအညီပေးကြတော့မယ်၊ မေတ္တာပွားလျှင် အကျိုးတရားတွေ ရနေမှာပဲ၊
အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တောင်မှ မေတ္တာစူးရှသေးတာ၊အသိဥာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုရင် ပိုပြီးစူးရောက်မယ်၊
(ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ကြီး၏ ဩ၀ါဒကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည်၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖွယ် ကောင်းလှ၏)
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:38 AM0comments
၁။ ယစ်မသည် ဥအတွက်အသေခံသည်။
၂။ စာမရီသားကောင်သည် အမြီးအတွက် အသေခံသည်။
၃။ ရဟန်းသည် သီလအတွက် အသေခံသည်။
၄။ သစ်ပင်အားနည်းလျှင် လေမုန်တိုင်း တိုက်လှဲသည်။
၅။ ရဟန်းသမာဓိနည်းလျှင် ကိလေသာမုန်တိုင်း တိုက်လှဲသည်။
၆။ စိတ်သည် တောမျောက်ကဲ့သို့ လော်လည်ဧ။် ။ အလိုမလိုက်ရာ။
၇။ ကာလကို လူ-မစားလျှင် လူကို ကာလ စားသည်။
၈။ သည်းခံခြင်း လက်နက်ဆောင်လျှင် ဒေါသမီး မလောင်။
၉။ တုတ်လက်နက်ဆောင်လျှင် ခွေးဟောင်သည်။
၁၀။ ဦးခေါင်းပြောင်ရိတ်ခြင်းသည် မာနကိုလည်း ရိတ်သည်မည်ဧ။် ။
၁၁။ ဦးချိုကျိုးသော နွားသည် မာနလည်းကျိုးသည်။
၁၂။ မြွေဆိုး ပါးပျဉ်းထောင်လျှင် လူရိုက်ခံရသည်။
၁၃။ ရန်မထောင်မှ ရန်အောင်သည်။ ရန်ထောင် ရန်လှောင်မိတတ်သည်။
၁၄။ ရန်မလိုမှ ရန်ပြိုသည်။ ရန်လို ရန်ပိုတတ်လှသည်။
၁၅။ သလေးနှံ အဆံမရှိခင် ထောင်သည်။ အဆံပြည့်လျှင် ညွတ်သည်။
၁၆။ ဂါရ၀ကင်းသူ ဂုဏ်သတင်းမပြူ။ နွားစာငုတ်တိုနှင့်တူသည်။
၁၇။ သူတစ်ပါးလှေကို ဖာနိုင်လျှက် မိမိလှေကို မဖာလျှင် ရေနစ်တတ်သည်။
၁၈။ ဥဒေါင်းငှက် အက ကောင်းသော်လည်း စအိုပေါ်၍ အဆိုအမည်ခံရသည်။
၁၉။ ရေကန်၌ မှော်ကိုဖယ်၍ သောက်ရေခတ်ရသည်။
၂၀။ မသူတော်၌ အပြစ်ကိုဖယ်၍ ဂုဏ်ကောင်းရှာရသည်။
၂၁။ တုံးတတားလျှောက်စဉ် အရပ်တစ်ပါးမကြည့်နှင့် ချောက်သို့ကျလိမ့်မည်။
၂၂။ သံသရာတံတားလျှေက်စဉ် သူတစ်ပါးအပြစ်မကြည့်နှင့် သံသရာချောက်သို့ ကျလိမ့်မည်။
၂၃။ တရားပွဲကား လူကျဲတဲ၊ ရပ်ရွာပျော်ပွဲ တသဲသဲ။
၂၄။ ရိုသေစွာ ခစားလျှင် မင်းခစားပင် မင်းကိုနိုင်သည်။
၂၅။ အဆင်းလှလျှင် အိမ်သူဇနီးပင် လင်ကိုနိုင်သည်။
၂၆။ ကျင့်ဝတ်မချွှတ်လျှင် တပည့်ပင် ဆရာကိုနိုင်သည်။
၂၇။ မြင်းနိုင်လို ဇက်ဆွဲ၊ လှေနိုင်လို တက်ဆွဲ၊ ဆရာနိုင်လို ကျင့်ဝတ်ရိုသေမြဲ။
၂၈။ အပြစ်ပြ၍ ဆုံးမသူကို ရွှေအိုးပေးသူဟု ဆည်းကပ်ရမည်။
၂၉။ ပန်းပဲဆရာ အထုမခံသော သံတုံး လက်နက်မဖြစ်။
၃၀။ ကျောက်ဆစ်ဆရာ အဖြတ်မခံသော ကျောက်တုံး အရုပ်မဖြစ်။
၃၁။ ဆရာကောင်းအဆုံးအမ မခံသောတပည့် သူကောင်းမဖြစ်။
၃၂။ ရေနက်ရာသို့ ပြေးဝင်သော ငါး ကျီးငှက်အစာမဖြစ်။
၃၃။ အဆုံးအမသို့ ပြေးဝင်သောတပည့် မာရ်နတ်အစာမဖြစ်။
၃၄။ နွားကျောင်းသားသည် နွား-ခြင်မကိုက်အောင် မီးခိုးတိုက်သည်။
၃၅။ ဆရာသည် တပည့် ကိလေသာခြင် မကိုက်အောင် တရားမီးခိုးတိုက်သည်။
၃၆။ မြေခွေးသည် ခြင်္သေ့စားကြွင်းဖြင့် မာန်တက်သည်။
၃၇။ ပုထုဇဉ်သည် အရိယာစားကြွင်းဖြင့် မာန်တက်သည်။
၃၈။ ဖားငယ်သည် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျှက် ခြင်္သေ့မာန်တက်လျှက် ကျီးချီသောအခါ ပီယတ်ပီယတ်မြည်သည်။
၃၉။ ပုထုဇဉ်သည် လာတ်ပေါလျှင် သူဌေးမာန်တက်လျှက် ဖျားနာသောအခါ တအင်အင်ညည်းသည်။
၄၀။ ကြာပင်အောက်ကဖား ကြာဝတ်ဆံမစား ရွှံ့စားသည်။
ပိတုံးကား အဝေးမှကြာဝတ်ဆံ လာစားသည်။
၄၁။ သာသနာတွင်းသား သာသနာဝတ်ဆံမစားလျှင် ပိတုံးအား ရှက်သင့်သည်။
၄၂။ သစ်ပင်ကြီးသည် ခုတ်လှဲသူကို မလှဲမချင်း အရိပ်ဖြင့် အေးစေဧ။် ။
၄၃။ နံ့သာတုံးသည် မီးရှို့သူကို မကျွှမ်းမခြင်း အနံ့ဖြင့် မွှေးစေဧ။် ။
၄၄။ သူတော်ကောင်းသည် ညှင်းဆဲသူကိုသော်လည်း မသေမချင်း အကျိုးဆောင်ဧ။် ။
၄၅။ တောမီးသည်သစ်ရွက်ခြောက်ကို လောင်လွယ်ဧ။် ။ သစ်ရွက်စိုကို မတတ်နိုင်။
၄၆။ မသူတော်မီးသည် မေတ္တာခန်းသူကို လောင်လွယ်ဧ။် ။ မေတ္တာဖြန်းသူကို မတတ်နိုင်။
၄၇။ ဆေးဆရာသည် လူနာနှင့်ပြိုင်၍ အသက်မထွက်ကောင်း။
၄၈။ အကောင်းသည် အရူးနှင့်ပြိုင်၍ အ၀တ်မလစ်ကောင်း။
၄၉။ သူတော်ကောင်းသည် မသူတော်နှင့်ပြိုင်၍ ဒေါသမဖြစ်ကောင်း။
၅၀။ ကျားကြောက်၍ ပြေးစဉ် ခွေးဟောင်သည်ကို အရေးမယူရ။
၅၁။ ငရဲကြောက်၍ သီလစောင့်စဉ် မသူတော်ညှင်းသည်ကို အရေးမယူရ။
၅၂။ ရန်သူကို မီးခဲ ကိုင်ပစ်လျှင် မိမိလက် ရှေးဦးစွာ လောင်ဧ။် ။
၅၃။ ရန်သူကို အမျက်ထွက်လျှင် မိမိဂုဏ် ရှေးဦးစွာ ပျက်၏ ။
၅၄။ ရန်သူလာဆဲ၍ ပြန်ဆဲလျှင် မိမိလည်း အရှက်ကွဲ၏ ။
၅၅။ မာရ်နတ်ပစ်သော လက်နက်သည် သည်းခံသော ဘုရားရှေ့၌ ပန်းကုံးအသွင်ဖြင့် အဖူးအမျှော်ဝင်ဧ။် ။
၅၆။ သမုဒ္ဒရာရေ မီးကြောင့် မကျွှမ်း၊ မြင်းမိုရ်တောင် လေကြောင့် မလှုပ်၊ ကျောက်ခဲ ရေကြောင့် မကြေ၊ သူတော်ကောင်း မသူတော်ကြောင့် မတုန်လှုပ်။
၅၇။ မသူတော် အမျက်ကြောင့် သူတော်ကောင်းဂုဏ်ပျက်မခံ။
၅၈။ သူတော်ကောင်း အမျက်ထွက်လျှင် မသူတော် အလိုပြည့်သည်။
၅၉။ ရန်သူညှင်းဆဲခြင်းသည် မိမိ၏ ရှေးကံ ရှေးဥစ္စာပင်တည်း။
၆၀။ မိမိကံကြောင့် မိမိ ဒုက္ခတွေ့သည် ဘယ်သူမပြု မိမိမှု။
၆၁။ ညဉ့်အခါ သားကို ခွေးထင်၍ သတ်သော အဘသည် သား၏ ရန်သူလော။
၆၂။ သစ်ပင်မှ ကျသေလျှင် သစ်ပင်သည် ထိုသူ၏ ရန်သူလော။
၆၃။ စစ်သူရဲသည် ပြင်ပရန်သူကို နိုင်သော်လည်း အတွင်း ရန်သူမှ ရှုံး၏ ။
၆၄။ အမျက်ထွက်သူကို အမျက်မထွက်သူ အမြဲ နိုင်၏ ။
၆၅။ မကောင်းပြောသူကို အကောင်းပြောသူ အမြဲ နိုင်၏ ။
၆၆။ စေးနှဲသူကို ပေးကမ်းသူ အမြဲ နိုင်၏ ။
၆၇။ မုသားဆိုသူကို သစ္စာဆိုသူ အမြဲ နိုင်၏ ။
၆၈။ သိကြားမင်း လက်နက်ကား မိုးကြိုး။
၆၈။ ယမမင်း လက်နက်ကား မျက်စောင်း။
၆၉။ ဝေဿ၀ဏ် လက်နက်ကား အစွယ်။
၇၀။ မသူတော်လက်နက်ကား ဒေါသ။
၇၁။ သူတော်ကောင်း လက်နက်ကား ခန္တီ။(သည်းခံခြင်း)
၇၂။ ဗီလုံးငှက်သော်လည်း ကျွဲခြေရာခွက်ကို အမှီရလျှင် ဂဠုန်နှင့်တူ၏ အန္တရာယ်မရှိ။
၇၃။ ပုထုဇဉ်သော်လည်း သီလရှိလျှင် အရိယာနှင့်တူ၏ ။ အပါယ်မရောက်။
၇၄။ ရေရှိမှ ကြာပွားသည် သီလရှိမှ သမာဓိ များသည်။
၇၅။ ဗဟုဿုတရှိလျှက် သီလမရှိလျှင် ရေမတည်သော ကန်နှင့်တူ၏ ။
၇၆။ ပညာရှိလျှက် သီလမရှိလျှင် အသီးမရှိသော သစ်ပင်နှင့်တူ၏ ။
၇၇။ သီလရှိမှ ဒါနနှင့် ဘာဝနာအကျိုးပေးသန်သည်။
၇၈။ ပင်လယ်ကူးလိုလျှင် လှေသင်္ဘောတည်။ နတ်ပြည်တက်လိုလျှင် သီလလှေကားထောင်။
၇၉။ ပင်လယ်ကူးလိုလျှင် သင်္ဘောလုံအောင်ဖာ။သံသရာကူးလိုလျှင် သီလလုံအောင်ဖာ။
၈၀။ လောကီဥစ္စာစောင့်လျှင် တစ်သက်ချမ်းသာဧ။် ။
၈၁။ သီလစောင့်လျှင် ဘ၀အဆက်ဆက် ချမ်းသာဧ။် ။
၈၂။ ဆီမီးသည် လင်းခိုက် လူလယ်တင့်၏ ။ ငြိမ်းလျှင် မှောင်၏ ။ ညှော်နံ့ထွက်၏ ။
၈၃။ သီလသည် စောင့်ထိန်းခိုက် လူလယ်တင့်၏ ။ ပျက်လျှင် မှောက်၏ ။ ညှော်နံ့ထွက်၏ ။
၈၄။ တောအုပ်၌ မိဘကင်းသော သားသမီး ကျားစာဖြစ်၏ ။
၈၅။ သာသနာ၌ ဩ၀ါဒကင်းသော ရဟန်း မာရ်နတ်အစာဖြစ်၏ ။
၈၆။ ပေါက်ဖက်သော်လည်း မြလေးပန်းမှီ၍ လူဦးခေါင်းထက် ရောက်သည်။
၈၇။ မြေခွေးသော်လည်း ခြင်္သေ့မင်းခစား၍ ကျားမကိုက်နိုင်။
၈၈။ သူကန်းသော်လည်း ခြေသံနားထောင်လျှက် လိုရာအရပ် ရောက်သေးသည်။
၈၉။ ခြင်္သေ့သည် ကျားကိုနိုင်၏ ကိုယ်တွင်း ခွေးလေးသန်းကို မနိုင်။
၉၀။ မသူတော်သည် သူတော်ကောင်းကိုနိုင်၏ ။ ကိုယ်တွင်းအကုသိုလ်ကို မနိုင်။
၉၁။ ကျင်ကြီးသည် နွေးသည်ဖြစ်စေ အေးသည်ဖြစ်စေ အဆင်းလှသည်ဖြစ်စေ မလှသည်ဖြစ်စေ ရွံဘွယ်သာတည်း။
၉၂။ မသူတော်သည် အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်စေ မထွက်သည်ဖြစ်စေ စကားလှသည်ဖြစ်စေ မလှသည်ဖြစ်စေ ရွံဘွယ်သာတည်း။
၉၃။ မီးခဲသည် ပူသောအခါ လက်လောင်၏ အေးသောအခါ လက်မဲ၏ ။
၉၄။ မသူတော်သည် ဒေါသအခါ ကြောက်စရာ လောဘအခါ ရွံစရာဖြစ်၏ ။
၉၅။ ခွေးရူးကိုက်လျှင် ထိုသူရူး၏ ။ ထိုသူကိုက်လျှင် နောက်လူ ရူး၏ ။
၉၆။ ခွေးရူးသည် လူကောင်းအဆက်ဆက်ကို ရူးစေ၏ ။
၉၇။ မသူတော်သည် လူကောင်းအဆက်ဆက်ကို ယုတ်မာစေ၏ ။
၉၈။ ပဒုမ္မာကြာရိုးသည် ထက်ပိုင်းပြတ်သော်လည်း အမျှင်မပြတ်။
၉၉။ သူတော်ကောင်းသည် အဆက်ပြတ်သော်လည်း မေတ္တာမပြတ်။
၁၀၀။ အဆင်းမှီ၍ အကျင့်ပျက်လျှင် ထိုအဆင်းသည် ရွံဘွယ်တည်း
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:32 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:05 AM0comments
I ‘d like to explain about leadership and management The purpose of the paper want students know about it very well.
I will introduce the topic following: It needs to understand management theories , organizational structure, motivation, leadership, decision-making, communication, budgeting process, analyzing, improving, teaching and human resource administration.
A person who leadsagroup, organization (or) country is leader. It is consider how previous learning and experience influence the speed and accuracy with whichaleader can assess the situation, and subsequently determine the most appropriate course of action.
Leadership is ultimately about creatingaway for people to make something extraordinary happen.
They have five qualities.
1. They must be Transform values into action.
2. They must be visions into realities.
3. They must be obstacle into innovation.
4. They must be separateness into solidity.
5. They must risk into rewards.
Are there common traits that all leaders possess?
Can anyone become leader?
How smart are our leader?
Leadership is not born. We can bealeadership. Everyone can make as great leader.
Leadership is not word but in action.
It is the most important to getagreat leadership everywhere.
At the school, at the university or at the country, every one has chance to becomeagood leadership.
Leaders manage through Emotional Intelligence. They are self–aware and can manage their emotions.
They are also attuned to the feelings of others and are able to gauge their organization’s emotional state.
Emotional Intelligence can be learned and improved at any age. But Emotional Intelligence does not necessarily only come from life-experience.
Reading, listening, observing, understanding, and appreciation help us to improve in the our goal.
Effective leadership development requiresapositive desire, rather thananegative motivation on the part of the individual.
Emotional Intelligence is important for effective leaders.
A leader’s approach to decision-making and problem solving will depend onanumber of factor and beyond the style of leadership demonstrated.
There are two decision-making.
1. Programmed decision-making
2. Non-programmed decision-making
I now want to discuss self-leadership.
The essence of all individual, team and organization can change.
Visionary leadership demands courage.
Team unity means individual enrolment.
Organizational change can demand self-change.
Leaders must incorporate self-leadership through all the change philosophies, process, programmes and tools .
Leaders must give adequate time and effort, on self-leadership, and “walk their talk”.
Leaders must continually refer to their personal purpose, values, vision and courage.
After explaining about leadership, I will explain about management now.
Is the act of running and controlling?
Is commanding not managing?
So, we will discuss about management now.
Management is about proper guidance in order to maximize benefits and minimize the loses.
You are now living in the knowledge age.
Management is part of knowledge which is also understanding of intellectual works.
General management refers managing skills for everything including biz management, time management, life management… etc.
Management generates effectiveness and efficiency.
Without management skill, it is like the man without brain.
Some are born to eat.
Some are born to do.
Successful people are not afraid to fail and are willing to take risks. Unless you step out of your comfort zone , you will never be able to grow develop, and succeed at anything.
It’s been said that the comfort zone is the killer of human potential and it is! The reason people don’t like getting out of their comfort zone is primarily because of fear of failure.
So, if you want to success, you must beagood management. Self-interests come first .
What should be in second?
Your community, your nationality becomes second.
This is about life management.
When we study about “management”, we should know the “functions” and how it works.
Functions are the fundamental of general management.
Tactic, strategy and grand strategy are also higher level of management.
1. planning 2. organizing
3. leading 4. controlling
There are four functions of management.
1. planning chooses appropriate organizational goals and courses of action to best achieve these goals.
2. Organizing establishes task and authority relationship that allow people to work together to achieve organizational goals.
3. leading motivate, coordinate , and energize individuals and groups to work together to achieve organizational goals.
4. controlling establish accurate measuring and monitoring systems to exclude how well the organization has achieved its goals.
The act (or) process of making that you intend to achieve.
To arrange for something to happen (or) to be provided
To motivate, coordinate and energize other to do.
Giving platform, guidance and checking. And then, we must be planning four following;
1. forecasting, Establishing, and Objectives
2. devising, strategies
3. developing policies
Organizing is also the same way.
1. achieve coordinated effort
2. defining task and authority relationships
Leading must also be four following;
1. Give other people the direction to accomplish specific objectives.
2. understanding the real situation
3. inspiring others to do
4. Role model can make somebody having feeling or emotion.
Controlling is also the same way.
1. Ensure actual operations conform to planned operations.
2. Management in other way is about allocating and accommodating your resource most effectively.
A few of resources
4. Technological resources
5. Intellectual resources….etc
When we make doing anything, we have to do the decision making-process as follow;
3. develop alternative
4. evaluate decision
5. implement decision
6. select best alternative
The willingness to do something is condition by the action’s ability to satisfy some need for the individual.
3. Nature of the organization
These are individual motivation.
After the study and in use of swot analysis, your management will be more effect.
S. strength (internal)
W. weakness (internal)
O. opportunity (external)
T. threat (external)
1. Structural inertia
2. limited focus of change
3. group inertia
4. threat to established power relationships
5. threat to established resource allocations.
Now, we will compare leadership and management.
Lead not manage, there is an important different. (Bennis, 1989)
Leadership focuses on doing the right thing, management focuses on doing
things right. (covey,1996)
Managers perform functions in organizations and hold a
particular, formal, title and fulfilsarole .(Brooks, 2003)
Leading and managing complementary disciplines
1.Setting direction, planning and budget
Purpose, vision and targets, goal action and
Strategies for effecting change. Resources.
2. aligning people organizing and staffing
Creating coalitions, structure , defining job,
Getting commitment managing people
3. Sustaining motivation controlling actual expected
Keeping people moving performance, corrective action
So, leadership and managements are the most important to learn or study our school.
If we have to learn leading and managing in our school, we will improve more and more in the future.
I understand everyone can makeagood leader and manager that they haveagreat ambition.
The purpose of goals is to focus our attention.
A goal is nothing more thanadream withatime limit.
People with goals succeed because they know where they are going. There is no achievement without goals.
So, all students should be planning our goals where we want to get there.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 6:09 AM0comments
ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာ မဟာဗောဓိပင်ရှေ့ အမှတ်တရပုံရိပ်
ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ '0' ဒေသဆီ
Sky Net ဘယ်လဲ ဘာလဲ!
Eyes Here: Weekend Reads From the Opinion Section